खुसीको खबर : श्रम कार्यालय खुल्यो अब बिदामा आएका नेपाली यि देश जान पाईने । - Sacho Post
२०७८ जेष्ठ २९, शनिबार ०७:०६ बजे
काठमाडौ : वैदेशिक रोजगार विभाग श्रम कार्यालय ताहाचल अब प्रत्येक बुधबार खुल्ने भएको छ । बायोमेट्रिक नभएका व्यक्तिहरूको पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि मात्र प्रत्येक बुधबार कार्यालय खुल्ने श्रम कार्यालय ताहाचलले जनाएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि कार्यालयमा उपस्थित भई भौतिक रूपमा लिनुपर्ने सेवाहरू गएको वैशाख २४ गतेदेखि बन्द भएको थियो ।अहिले सरकारले तीन देशमा ‘ एक पटक उडान हुने गरी नियमित उडान खोलेसँगै विभागले पहिले
बायोमेट्रिक नभएका श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न कार्यालय खोल्ने जनाएको छ । कार्यालय बन्द रहेको समयमा पनि पाँच हजारभन्दा धेरैले अनलाइनमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । एक पटक बायोमेट्रिक भएकाले मात्र अनलाइनमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति लिन मिल्छ ।
खाडी देश कुवेतले कोरोना विरु’द्धको खाेप लगाएका गैर कुवेती नागरिकलाई आफ्नो देश प्रवेश गर्न दिने जनाइएको छ । कुवेत सरकारले मान्यता प्रदान गरेका कोरोना विरुद्धका
खाेप लगाएका यात्रुलाई कुवेत प्रवेश गर्न दिने त्यहाँका स्थानीय पत्रिकालाई उद्धृत गर्दै गल्फ न्युजले लेखेको छ । कुवेतले केही दिन पहिले बायोएनटेक, मोडेर्ना, अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका, जोनसन जोनसन खाेपलाई मान्यता दिएको छ । अब यी खाेप लगाएका यात्रुलाई कुवेत प्रवेश गर्न दिइने जनाइएको हाे ।
कोरोना महामारीको संक्रमण फैलिएसँगै कुवेतले गएको जनवरीदेखि नै आफ्ना नियमित उडानको ८० प्रतिशत उडान घटाएर दैनिक एक हजार यात्रु संख्या तोकेको थियो । गैर कुवेतीहरुलाई प्रवेशमा कडाइ गरेको थियो ।
तर मे २२ देखि भने यात्रुसंख्या बढाएर दैनिक पाँच हजार ताेकेकाे छ । जुनको अन्तिमदेखि कुवेतले आफ्ना सबै उन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु बिस्तारै खोल्दै जाने पनि स्थानीय पत्रिकाले लेखेका छन् ।
कुवेतले मे १० देखि नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्काबीच हुने सबै व्यवसायिक उडानहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यी चार देशबाट यात्रुहरू सिधै कुवेत जान पाउँदैनन् तर अन्य कुनै देशमा १४ दिन अनिवार्य बसेको खण्डमा भने कुवेत प्रवेश गर्न सक्छन् ।
तर अफिसियल, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी लगायतलाई भने स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर सजिलै प्रवेश गर्न सक्छन् । कोरोना विरुद्धकाे खाेप लगाएको खण्डमा प्रतिबन्ध लगाएका देशबाट आउने यात्रुको प्रवेशलाई पनि अनुमति दिने सक्ने गल्फ न्युजले जनाएको छ । तर यसबारेमा कुनै यकिन निर्णय भने भइसकेको छैन ।
ओमान : भिजिट लगायत विभिन्न भिसा वाहकलाई पनि ‘वर्क पर्मिट’ दिने !
अब ओमान प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकले त्यहाँ काम गर्न पाउने भएका छन् । ओमानले पछिल्लो समय आफ्नो भिसा सम्बन्धी नियममा परिवर्तन गर्दै भिजिट लगायत विभिन्न भिसा वाहकलाई पनि वर्क पर्मिट दिने जनाएको छ ।
त्यहाँको सीमा प्रहरीले जारी गरेको नयाँ संशोधित आप्रवासी आवास सम्बन्धी कानुनले ओमानमा सजिलै कामदार भिसा लिन बाटो खुलेको हो । गल्फ कोअप्रेशन काउन्सिल (जीसीसी) भिसा, विद्यार्थी भिसा, लगानीकर्ता भिसा, व्यापारिक भिसा, टुरिस्ट भिसा, एक्स्प्रेस भिसा तथा आफन्त तथा साथीभाइ भेट्न लिएको भिसा वाहकले वर्क पर्मिटकाे लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
यसरी आफ्नाे भिसालाई स्थायी वा अस्थायी कामदार भिसामा परिणत गर्न सकिनेछ । योसँगै ओमान प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकलाई त्यहाँ रोजगारीमा संलग्न हुन सजिलो हुने बताइएको छ ।
कहिल्यै धनी बन्न नसक्ने १२ किसिमका मानिस ! हेर्नुहोस तपाईं पर्नु भयो की?